Little Red Riding Hood muManhattan, inoyevedza nhaurwa naCarmen Martín Gaite | Zvazvino Zvinyorwa
Little Red Riding Hood muManhattan
John Ortiz | | Fantasy, Type, Vechidiki Mabhuku, Novela
Little Red Riding Hood muManhattan.
Little Red Riding Hood muManhattan (1990) ingano inonakidza yevechidiki yakagadzirwa naCarmen Martín Gaite. Iyi ingano yemazuva ano. Kutsvaga kwekusingaperi diatribe pakati pehope uye chokwadi. Iri rave zita rinorapwa nguva zhinji se "basa diki" mukati mebhuku rakakura remunyori weSalamanca. Zvisinei, yakanga iri kubudirira kwekutsikisa kubudirira (rakanga riri bhuku rakatengwa zvakanyanya muSpain muna 1991).
Uye hongu, ye "diki", haina iota. Munhu akashinga chete ndiye anotsunga kuwedzeredza imwe yenyaya dzepasirese dzinonyanya kuzivikanwa kuvanhu. Iyo nyaya ine mazana emakore echinyakare tsika pamuromo wayo, iyo, yekutenda - kunyanya - kuna Charles Perrault uye nehama Grimm, inoramba ichishanda uye isingaperi. Basa remunyori rakave nemhedzisiro zvekuti muna 2016 iyo Carmen Martín Gaite Rondedzero Mubairo.
1 Carmen Martín Gaite: munyori
1.1 Kana kuve piyona kwakakodzera uye "rakanyorwa"
1.2 Nguva yekunyora
1.3 Zvimwe zviitiko zvekunyora
2 Uye Little Red Riding Hood yakaenda kuNew York
2.2 Nyika yakajairika?
2.3 Yeyekufungidzira uye verisimilitude
3 Pasina zvivakwa pamberi pekushoropodzwa
4 Kufunga kwebasa
5 Little Red Riding Hood muManhattan: yakaodza moyo chikamu cheruzhinji?
Carmen Martín Gaite: munyori
Akazvarwa muSalamanca muna 1925, aive mumwe wevanyori vane mukurumbira vanotaura chiSpanish vezana ramakore rechiXNUMX. Yakavawo chiratidzo chemukadzi anofambira mberi. Saizvozvo, pakati pezvikwereti zvakawanda zvakagamuchirwa muhupenyu pane Progressive Women Award mune yayo yekutanga edition, yakaitwa muna 1990.
Kana kuve piyona kwakakodzera uye "rakanyorwa"
Munguva ye1970s, 1980s, uye 1990s, Gaite akatanga kuzivikanwa semukadzi (chisiri chisingaenzaniswi, chakapihwa pfungwa yenguva yacho). Zvakare, apo muna 1978 yakave yekutanga kupihwa iyo National Literature Prize yekuSpain yenoverengeka Kamuri rekuseri.
Chiri chaicho "chinoshamisa" ndechekuti panguva ino - kunyangwe muzana ramakumi maviri nemasere - chokwadi (chekuva mukadzi) chichiri kushandiswa sekukosha kwemusiyano. Zviri pachena chirevo, zvirinani, kusarongeka uye kusarura, nekuti basa raCarmen Martín Gaite rakakura uye rakasiyana kwazvo.
Akadzidza Philosophy uye Tsamba paYunivhesiti yeSalamanca. Ikoko akawana degree muRomance Philosophy. Kunyangwe riwaya rake rekutanga, Iyo spa, rakaburitswa muna 1955, Martín Gaite akareurura pazviitiko zvakati wandei kuva munyori akangwara. Kubva pamakore masere akatanga kutsvaga kwake kwezita uye kunyora dzimwe nyaya. Hupenyu hwake hwaigara huchibatanidzwa nenyika yetsamba.
Asi haisi iyo chete nhoroondo iyo manhamba pane ako kutangazve. Akanyora mitambo miviri: Tsvimbo yakaoma (rakapedzwa muna 1957, rakaburitswa muna 1987) uye Sisi vadiki (yakapera muna 1959, yakaburitswa muna 1999). Saizvozvowo, akamira semunyori wenyaya. Muchokwadi, basa rake Amorous kushandiswa kwespanish yapashure pehondo nguva, yakamuita akakodzera iyo Anagrama Essay Mubairo muna 1987.
Zvimwe zviitiko zvekunyora
Munyori wechiSpanish akapawo nguva yekutsoropodza zvinyorwa uye kududzira zvinyorwa nevanyori vakaita saGustave Flaubert naRainer Maria Rilke. Pamusoro pezvo, akabatana mukusimudzira zvinyorwa zvekuteerera zveTerevisión Española: Teresa Mutsvene waJesu (1982) uye Celia (1989). Iyo yekupedzisira yakavakirwa pane nyaya dzaElena Fortún. Carmen Martín Gaite akafa muna 2000, akabatwa nekenza.
Uye Little Red Riding Hood yakaenda kuNew York
Unogona kutenga bhuku pano: Little Red Riding Hood muManhattan
Kutanga, Izvo hazvigoneke kufuratira inotevera mamiriro: iyo nyaya dzeRed Red Riding Hood inzvimbo yakabatana yevanhu vese vakambonzwa kana kuverenga. Naizvozvo, inomiririra muenzaniso wakanaka kwazvo webasa rakavakwa kubva ku "share memory".
Chepiri, Basa raMartín Gaite hariteedzere mutsara chaiwo wenyaya ye "classic" ye Little Red Riding Hood. Shanduko hadzisi dze "cosmetic" chete. Kana iye haazvikwanise iye kudhirowa New York sesango rizere nenjodzi dzemazuvano, rizere nesango "mhuka" uye nevavariro yakaipa kwazvo.
Little Red Riding Hood muManhattan iko kuchema kwerusununguko. Unyanzvi hwe protagonist hunoitika mumatanho epasi pevhu, akanyudzwa munyika yaaifunga kuti aiziva. Muchokwadi, iko kutsva kwemukati, kwakadzika, kure kupfuura kungovawo "kwepasi pevhu" rwendo. Iye oga, akapunyuka kubva kuvabereki vake, anopedzisira achitarisa mukati make kuti aone uye kuteedzera chishuwo chake chikuru.
Iyi diki tsvuku yekutasva hood inofanirwa kutarisana nepasi rose, chokwadi, munhu akaipa, anonzi Woolf, haakwanise kusavapo. Anopikisa zvakaipa zvese, kuzvida uye kukara. Nenzira imwecheteyo, akakwana anokwenenzvera kune yazvino ngano izere neManichean manhamba anoonekwa: mari.
Asi Sara - musikana akapfeka ngowani kubva kuBrooklyn, ane shungu yekuenda kuManhattan - haafanire kungotarisana nevanozviti "vakaipa". Iye anokurudzira mukati mevatambudzi vake ratidziro yezviito zvavo vamene nedonzo rokuvapo kwavo. Saka mubvunzo werusununguko rwechokwadi unobuda usingadzivisike; munhu wese anofanirwa kutora mutoro wesarudzo dzake, kunyangwe dzakarurama kana kwete.
Yeyekufungidzira uye verisimilitude
Carmen Martín Gaite akakwanisa nebasa iri - kunze kwekusimbisazve zita rake mukati mevanyori "super sales" muchiSpanish - kumutsidzira kunyora mabhuku. Zvakanaka, munyori wechiSpanish akadzivirira kuenderana kwekuvimbika uye fungidziro mune iwo iwo mavara. Kunyanya, akati "kuti nyaya ndeyechokwadi hazvireve kuti ndeyechokwadi, uye haifanire kutendeseka."
Quote naCarmen Martín Gaite.
Musikana anofamba mumigwagwa yeNew York oga miganhu pane zvisina musoro. Nekudaro, iyo nyaya inoshanda pasina kusiira nzvimbo yekuti muverengi azvibvunze kana ichigona kana kwete. Naizvozvo, zviitiko zveiyi Little Red Riding Hood zvinomiririra yakatetepa ngano dzazvino. Kure nenyika yekufungidzira inotsanangurwa musango rakasviba iro vasikana vekutanga vasina ruzivo vaifanira kuyambuka kunosangana nemhumhi hombe yakaipa.
Pasina zvivakwa pamberi pekushoropodzwa
Martín Gaite akazvipira zvakanyanya uye akabudirira kutsoropodza kwemabhuku. Izvi pasina mubvunzo zvakamubatsira kuti aone basa revanyori ava (nekudaro, pasina makotesheni kana iticiki) pasina chero rudzi rwezvivakwa. Sezvo, kana paine chimiro chinogara chichionekwa nekufungira - kunyangwe nenzira inoshoreka - mukati mehunyanzvi mune zvese, ndezveyemutsoropodzi. Zvakarurama kana zvisizvo, ivo vanowanzo nyorwa sevanonetsekana.
Kunyange vatsoropodzi vanosvika pakuonekwa sevasingakwanise kusiira basa rakakodzera kufungidzirwa. Asi mukadzi weSalamanca aive akatarisira kuongororwa kweava nyanzvi. Nenzira imwecheteyo, aifarira kwazvo kuziva kugamuchirwa kwebasa rake pakati peveruzhinji. Nekudaro, iye aigona kuwana zvinokwanisika zvinhu zvengano dzake izvo zvakafuratirwa panguva yekunyora.
Kunyangwe paine kusahadzika kubudirira mukutengeserana, ruzhinji rwevanhu rwakakomberedza Little Red Riding Hood muManhattan yakagara yakakamurwa. Chikamu chevaverengi chakawana chiitiko chinonakidza. Kune vamwe, iyo isina mhosva diki tsvuku yakakwira hood mu "guta risingatomborara", pamwe nambuya vake uye hombe mhumhi yakaipa, zvinongomiririra chikonzero chekurovedza muviri mukuzviongorora.
Kune rimwe divi, kwaive nevanhu vaifarira nyaya iyi vasina kubvunza mibvunzo yakawandisa pamusoro pemusikana wekuBrooklyn aifamba achipfuura neManhattan. Ivo zvakare havana hanya zvakanyanya kana Little Red Riding Hood yaive nenguva yekufamba-famba kuCentral Park pasina kuparara kune chero chikara chinotyisa. Zvirinani kwete "chaiko."
Little Red Riding Hood muManhattan: Vakaodzwa mwoyo chikamu cheveruzhinji?
Asi paive neboka rechitatu risina kuwana zvavaitarisira: iyo yechinyakare medieval tale asi yakaiswa muNew York. Pane chakakanganisika neichi? Muchokwadi, tsananguro yacho haisi yekumanikidza. Iko hakuna mhinduro imwechete. Zvirokwazvo Carmen Martín Gaite aisazobvumirana nepfungwa iyi. Nekuti ndizvo zvinoita kunakidzwa kwekuverenga (uye hunyanzvi mune zvese) ndezve nezve.
Iyo yekufungidzira genre inoenderana nekutsvaga nyowani - kana dzimwe nguva yekare - nyika pasina kuisa zvakafanofungidzirwa pfungwa kududzira iwo ruzivo. SaSara, "Little Red Riding Hood yeManhattan." Chero zvazvingaitika, basa raMartín Gaite kukoka kubvunza kuti rusununguko rwekusununguka chii uye kana ruripo zvechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Little Red Riding Hood muManhattan